MRICC - Xuzhou Fonnov ဗိသုကာပစ္စည်းများ Co. , Ltd
2018 လူမီနီယမ်သစ်သားသတ္တုဘောင် box ကိုမျက်နှာကြက်ကိုဆိုင်းငံ့
ကျနော်တို့တက်ကြွစွာ box ကိုမျက်နှာကြက်ကိုဆိုင်းငံ့ကိုအကောင်းဆုံး 2018 လူမီနီယမ်သစ်သားသတ္တုဘောင်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဆီဦးတည်ကျူးလွန်ဈေးကွက်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ entity ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးထား 2018 လူမီနီယမ်သစ်သားသတ္တုဘောင် box ကိုမျက်နှာကြက်ကိုဆိုင်းငံ့သီးသန့်ထိပ်တန်းပစ္စည်းသုံးပြီးဒီဇိုင်းနှင့်ခေတ်သစ်နေကြသည် tools တွေကိုသတ်မှတ်စျေးကွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူထပ်တူဖြစ်သည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 2018 လူမီနီယမ်သစ်သားသတ္တုဘောင် box ကိုမျက်နှာကျက်နေကြသည်ကိုဆိုင်းငံ့ ...
2018 အလှဆင်မျက်နှာကြက်ကြွပ်အတွက်လူမီနီယံ Lay ဆိုင်းငံ့
ငွေရတတ်သောသူဒိုမိန်းကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုကျနော်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး 2018 အလှဆင်မျက်နှာကြက်ကြွပ်အတွက်လူမီနီယံ Lay ဆိုင်းငံ့ပါပြီ။ ခေတ်မီနှင့်အတူဒီဇိုင်း, မျက်နှာကျက်ဤဒိုမိန်း၏ကျယ်ပြန့်အသိပညာရရှိထားသူဖြစ်သောပညာရှင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကတီထွင်နေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး dispatch မီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 2018 အလှဆင်မျက်နှာကြက်ကြွပ်အတွက်လူမီနီယံ Lay အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်တင်းကြပ် check လုပ်ထားကြသည်ကိုဆိုင်းငံ့ ...
ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ်တီထွင်ထားတဲ့လူမီနီယံမျက်နှာကျက်နှင့်ပျဉ်မျက်နှာကြက်နဲ့တူအတွင်းပိုင်းလူမီနီယံပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်တစ်အစအဆုံးအကုန်ကိုဆက်ကပ်။ မတူညီစက်မှုဇုန် applications များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းလူမီနီယံပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်အဘို့အမြင့်မားသင့်လျော်သောတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပါတယ်။ clients ၎င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဝယ်လိုအားအပေါ်မှာအခြေခံကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အဆင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ variegated စီးရီးပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်။ ကလစ်လိုပဲ ...
ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအများကလေးစားဖောက်သည် 2018 ဖက်ရှင်လူမီနီယံစာရွက်သတ္တုမျက်နှာကျက်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုအကွာအဝေးပေးပါသည်။ ဤသည် 2018 ဖက်ရှင်လူမီနီယံစာရွက်သတ္တုမျက်နှာကျက်ဆေးရုံများ, စားသောက်ဆိုင်, ရုံးအဆောက်အဦ, ဘူတာရုံ, စတိုးဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များအတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားဖောက်သည်ဒီထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ အမျိုးအစား: မျက်နှာကျက် ...
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လူမီနီယံကိုဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်သာလွန်တန်းသတ္တု finish ကိုအဖြစ်ဤအမြင့်မားနှစ်သက်သောလုပ်ရသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင် လုပ်. ဈေးကွက်ထဲမှာတောင်းဆိုကြောင်းလက်ရာမြောက်သောစုဆောင်းခြင်းပါဝင်သည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လူမီနီယံကိုဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်စုဆောင်းခြင်းလည်းထွန်းသစ်စစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှုန်းအဖြစ်ပြည့်စုံလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားဖြင့်ရရှိနိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှထုံးစံ ...
ကြောင့်ကျနော်တို့ရုံးတွေ, မောလ်များစသည်တို့ကိုဘို့နဲ့ Big လျှော့မျက်နှာကျက်နွေဦးကလစ်များမပူဇော်နိုင်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျော်ကြားသောပညာရှင်များမှအဲဒီ Big လျှော့မျက်နှာကျက်နွေဦးကလစ်ပ်အရောင်များနှင့်အမျိုးအစားမျိုးစုံရရှိနိုင်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားနဲ့ Big လျှော့မျက်နှာကျက်နွေဦးကလစ်ပ်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အရှေ့ဖြစ်ကြပြီးအလွန်အမင်းအကြမ်းခံသောအရာအကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ဤရွေ့ကားနဲ့ Big လျှော့မျက်နှာကျက်နွေဦး ...
အလူမီနီ perforated မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာချိတ် 129
ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအများကလေးစားဖောက်သည်လူမီနီယံဖောက်ထားမျက်နှာကျက် 129 အပေါ် Hook ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုအကွာအဝေးပေးပါသည်။ ဤသည် Hook လူမီနီယံဖောက်ထားမျက်နှာကျက်အပေါ် 129 ဆေးရုံများ, စားသောက်ဆိုင်, ရုံးအဆောက်အဦ, ဘူတာရုံ, စတိုးဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များအတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားဖောက်သည်ဒီထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ အမျိုးအစား: မျက်နှာကျက် ...
2017 လူမီနီယမ် faux သစ်သားအရောင်နှင့်အတူမျက်နှာကျက်ထဲမှာကလစ် perforated
အဆိုပါထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ဦးအဖြစ်ထင်မှတ်ကျနော်တို့ faux သစ်သား colorQ နှင့်အတူမျက်နှာကျက်များတွင် 2017 လူမီနီယမ်ဖောက်ထားကလစ်၏ကျယ်ပြန့ကမ်းလှမ်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ faux သစ်သားအရောင်နှင့်အတူမျက်နှာကျက်တွင်ဤ 2017 လူမီနီယမ်ဖောက်ထားကလစ်သူတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေး, တိကျမှန်ကန်သောရှုထောင့်နှင့်အမြင့်မားတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ထိရောက်မှုတို့အတွက်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးခွန်အားနှင့်ကြာကြာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘဝ, ဤ 2017 ရှိနေသော်ငြားလည်း ...
ကနေဒါများအတွက် 2017 ဖက်ရှင်ဇယားကွက်မျက်နှာကျက်ဒီဇိုင်း
ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကနေဒါများအတွက် 2017 ဖက်ရှင်ဇယားကွက်မျက်နှာကျက်ဒီဇိုင်းများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းမှာရည်ရွယ်ပါသည်။ အထူးသကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်ဘို့ထွင်းထု, ကနေဒါများအတွက် 2017 ဖက်ရှင်ဇယားကွက်မျက်နှာကျက်ဒီဇိုင်းဘို့ငါတို့ဖြေရှင်းချက်အလွန်အမင်းဈေးကွက်ထဲမှာတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာဤဝန်ဆောင်မှုသည် ....
2017 လူမီနီယမ်အလှဆင်စတုရန်းမျက်နှာကျက် tile ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအများကလေးစား clients များအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို GI နှင့်လူမီနီယံကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ကြောင်း 2017 လူမီနီယမ်အလှဆင်စတုရန်းမျက်နှာကျက် tile ကို၏ကျယ်ပြန့ပေးနေကြသည်။ ၎င်း၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုစာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးဒီဇိုင်နာများအမျိုးမျိုးသော parameters များကိုပေါ်မှာဤစနစ်အားစမ်းသပ်။ အပြင်ဒီကနေကျနော်တို့၏မတူညီလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းများ၌ဤစနစ်ကပေး ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းကကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်နှင့် 2017 လူမီနီယမ်သတ္တုပျက်စေမျက်နှာကျက်စနစ်၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကွာအဝေးထောက်ပံ့နေသည်။ ဤရွေ့ကား 2017 လူမီနီယမ်သတ္တုပျက်စေမျက်နှာကျက်မှုစနစ်မြင့်မားအကျိုးရှိစွာဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်း၏လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်မျက်စိနှစ်သက်ဒီဇိုင်းများများအတွက်အမျိုးမျိုးသောလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးအဖြစ်အဆင်ပြေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအထောက်အပံ့ကိုပေးအလွန်အကြမ်းခံအဆောက်အဦများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 2017 လူမီနီယမ်သတ္တုပျက်စေမျက်နှာကျက်မှုစနစ်ရှိပါတယ် ...
ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူ install လုပ်ထားသည့်စစ်မှန်သောလူမီနီယံသတ္တုကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ကြောင်း 2017 တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်လူမီနီယံမျက်နှာကျက်ပျက်စေ၏ပံ့ပိုးပေးဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကား 2017 တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်လူမီနီယံမျက်နှာကျက်ပျက်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ preference ကိုနှုန်းအဖြစ်အများအပြားအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ 2017 တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်လူမီနီယံမျက်နှာကျက်ပျက်စေကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများ, တွင်တပ်ဆင်နေသည် ...
hot ရောင်းချရန်လူမီနီယံအမြှုပ်ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက် panel က
ကျနော်တို့တက်ကြွစွာအကောင်းဆုံးဟော့ရောင်းချရန်လူမီနီယံအမြှုပ်ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက် panel ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဆီဦးတည်ကျူးလွန်ဈေးကွက်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ entity ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးထားဟော့ရောင်းချရန်လူမီနီယံအမြှုပ်ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက် panel ကိုသီးသန့်သတ်မှတ်စျေးကွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူထပ်တူအတွက်ထိပ်တန်းတန်းပစ္စည်းသုံးပြီးနှင့်ခေတ်မီရေးကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းနေကြသည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟော့ရောင်းချရန်လူမီနီယံအမြှုပ်ခေါင်မိုးမျက်နှာကျက် panel ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြင်းဖြင့်ချီးကျူးကြသည် ...
2017 အရည်အသွေးလူမီနီယမ် Acoustic မှားသောမျက်နှာကျက်ဘုတ်အဖွဲ့စိတ်ချပါ
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 2017 အရည်အသွေးစိတ်ချပါလူမီနီယမ် Acoustic မှားသောမျက်နှာကျက်ဘုတ်အဖွဲ့သာလွန်တန်းသတ္တု finish ကိုအဖြစ်ဤအမြင့်မားပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာတောင်းဆိုစေရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင်လုပ်ကြောင်းလက်ရာမြောက်သောစုဆောင်းခြင်းပါဝင်သည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 2017 အရည်အသွေးလူမီနီယမ် Acoustic မှားသောမျက်နှာကျက်ဘုတ်အဖွဲ့စုဆောင်းခြင်းပြည့်စုံလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားဖြင့်ရရှိနိုင်ကိုလည်း လုပ်. ရနိုင်စိတ်ချပါ ...
ခရစ်စမတ်အလှဆင်ဆွဲထား 2017 ပူ-ရောင်းချသတ္တုမျက်နှာကျက်
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းကကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်နှင့်ခရစ်စမတ်အလှဆင်ဆွဲထား 2017 ပူ-ရောင်းချသတ္တုမျက်နှာကျက်၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကွာအဝေးထောက်ပံ့နေသည်။ ခရစ်စမတ်အလှဆင်ဆွဲထားသည်ဤ 2017 ပူ-ရောင်းချသတ္တုမျက်နှာကျက်မြင့်မားအကျိုးရှိစွာဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်း၏လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်မျက်စိနှစ်သက်ဒီဇိုင်းများများအတွက်အမျိုးမျိုးသောလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးအဖြစ်အဆင်ပြေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအထောက်အပံ့ကိုပေးအလွန်အကြမ်းခံအဆောက်အဦများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 2017 ပူ-ရောင်းချသတ္တုမျက်နှာကျက်ကာစရာကုလားကာ ...
ဒီဇိုင်း Shape ကြေးမုံလူမီနီယမ် Panel ကိုများအတွက် 4mm ကြေးမုံ Finish ကို ACP
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမြင့်မားသည့်ဖောက်သည်ကြေးမုံလူမီနီယမ် Panel ကိုပုံဖော်ဒီဇိုင်းသည် 4mm ကြေးမုံ Finish ကို ACP ပေးမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က high-grade ကို gypsum ၏အသုံးချနေသဖြင့်မှားယွင်းသောမျက်နှာကျက်တည်ဆောက်နေနှင့် fabricating များအတွက်အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများ, အိမ်များနှင့်အဆောက်အဦးမှဤဝန်ဆောင်မှုသည်။ ထို့အပြင်ဒီဇိုင်းကြေးမုံလူမီနီယမ် Panel ကိုသူ Work ပုံဖော်ဤ 4mm ကြေးမုံ Finish ကို ACP ပဲ့အောက်မှာကွပ်မျက်ခံရခြင်းဖြစ်သည် ...
2018 လူမီနီယမ် acoustic ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ပြား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်ယူရေးအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကျနော်တို့စီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦးများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြပြီးလွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှုအတွက်တိကျရှုထောင့်ရှိသောငါတို့ clients များရဲ့အရည်အသွေး-စိတ်ချပါ 2018 လူမီနီယမ် acoustic ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ပြားကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ ဤရွေ့ကား 2018 လူမီနီယမ် acoustic ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်ပြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်ယူရေးအေးဂျင့်များ၏သတိဝီရိယအောက်မှာဒီစျေးကွက်၏ယုံကြည်စိတ်ချစျေးသည် '' ကနေဝယ်ယူနေကြသည်။ မှခွဲပြီး...
နယူးယာဉ်သတ္တု Wood ကစပါးကိုပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်
ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်သတ္တု Grid မှတဆင့်အဓိကမျက်နှာကျက်ကနေဆွဲထားကြသည်။ သတ္တု, ဒါမှမဟုတ်စွန်ခံ-သံမဏိ, ပြားကိုဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သတ္တုပြားယေဘုယျအားဖြင့်အဖြူချောအတွက်လာ။ နယူးယာဉ်သတ္တု Wood ကစပါးကိုပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်, tile ကိုဆွဲသွင်းပါဝင်ဒီဇိုင်းကိုအခြားနည်းလမ်းနဲ့ options က၎င်း၏ကျယ်ပြန့်လိုင်းမှတစ်ဆင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ဟောကြားခဲ့ပါတယ် (လေးအတွက်နှင့် Clip), သို့မဟုတ် ...
ကျွန်တော်တို့သည်မီးရထားဘူတာရုံများအတွက်လူမီနီယမ်ပွင့်လင်းမျက်နှာကြက်ပရီမီယံတန်းသတ္တုဆဲလ်မျက်နှာကျက်များကိုနျဆာပဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်မှကြီးမားသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြီးနောက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သတ္တုဆဲလ်မျက်နှာကျက်, ရထားလမ်းဘူတာအဘို့အလူမီနီယမ်ပွင့်လင်းမျက်နှာကြက်ကျွမ်းကျင်သူတင်းကြပ်သတိဝီရိယအောက်မှာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်နေသည်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သတ္တု ...
panel ကိုရိုး Pvdf အပေါ်ယံပိုင်းလူမီနီယံသတ္တုမျက်နှာကျက်
အလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူတိုးပွားလာကြကျနော်တို့ panel ကရိုး Pvdf အပေါ်ယံပိုင်းလူမီနီယံသတ္တုမျက်နှာကြက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ panel ကိုရိုးအဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Pvdf အပေါ်ယံပိုင်းလူမီနီယံသတ္တုမျက်နှာကျက်ကျယ်ပြန့်သည့်လေဆိပ်, ဆေးရုံတွေအတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်, ဟိုတယ်, Lobby, Metro ဘူတာ, ပြည်သူ့ Utility ကိုဧရိယာစသည်တို့ကိုအမျိုးအစား: မူလအစ၏မျက်နှာကျက်ကွက်များရာဌာန: Jiangsu, တရုတ် (ပြည်မကြီး), ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: .. ။
FONNOV,asubsidiary of CAIJING. A dynamic company based in China with business activities related to architectural and industrial materials industry. CAIJING isashareholder of3main businesses on manufacturing သတ္တုမျက်နှာကျက် & ဝတ်, အလူမီနီ extrusions, လည်းပဲ အမှုန့်အင်္ကျီကို။ FONNOV တစ်လက်အောက်ခံအဖြစ်, ပင်လယ်ရပ်ခြားစီးပွားရေးအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လှုပ်ရှားမှု၌တည်ရှိ၏။
spandrel များအတွက် 2017 အလှဆင် W300 လသာဆောင်မျက်နှာကျက်
ရုံးအဆောက်အဦများအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက် 600 * 600 သတ္တုမျက်နှာကျက်
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြင်ပတွင်အလှဆင်ဘို့အတင့်တယ်ဖောက်ထားလူမီနီယံ panel က
မျက်နှာကျက် panel ကို 10 အတွက်2နှစ်အတွေ့အကြုံ fireproof လူမီနီယံ Lay SGS နှင့်အတူ ''2x ''
© 2018 MRICC | XML ကိုမြေပုံအညွှန်း
မူပိုင်ခွင့်© Xuzhou Fonnov ဗိသုကာပစ္စည်းများ Co. , Ltd